Maxaa kasoo baxay kulankii Golaha Ammaanka QM ee is-mari waaga doorashada? - Caasimada Online
Home Warar Maxaa kasoo baxay kulankii Golaha Ammaanka QM ee is-mari waaga doorashada?
Maxaa kasoo baxay kulankii Golaha Ammaanka QM ee is-mari waaga doorashada?
New York (Caasimada Online) – Golaha Ammaanka QM ayaa shalay kulan deg deg ah ka yeeshay xaaladda Soomaaliya, gaar ahaan is-mari waaga ka taagan doorashada dalka, xilli muddo xileedka uu ka dhammaaday madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo.
Golaha ayaa kulankaas warbixin qaab online ah uga dhageystay ergeyga gaarka ah ee xoghayaha guud ee QM u qaabilsan Soomaalia James Swan, waxaana kadib ay soo sareen warbixin ku saabsan doorashada Soomaaliya
Xubnaha Golaha Ammaanka ayaa sheegay inay soo dhoweynayaan dadaallada socda ee lagu doonayo in lagu fuliyo heshiiskii 17-ka September, hase yeeshee waxay yiraahdeen inay aad uga walaacsan yihiin in wada-hadalladii ugu dambeeyey ee Dhuusamareeb ay soo dhammaadeen ayada oo aan heshiis la gaarin.
“Waxaan ugu baaqeynaa hoggaamiyayaasha Soomaalida inay si deg deg ah dib ugu billaabaan wada-hadalladooda, ayna u wada shaqeeyaan danta shacabka Soomaaliyeed, si ay heshiis uga garaaan doorashooyinka ayada oo aragtidu tahay in sida ugu dhaqsiyaha badan loo qabto doorashooyinka,” ayaa lagu yiri qoraalka Golaha Ammaanka.
“Waxaan sidoo kale soo dhoweeneynaa dhowaqa cusub ee wada-hadalalda dheeriga ah ee dhacay 15-ka Febraayo,” ayaa lagu yiri qoraalka.
Wada-hadallada 15-ka Febraayo, ayaa si kastaba waxaa soo galay mugdi cusub kadib markii Puntland ay sheegtay inaan lagala tashan, taas beddelkeedna ay soo jeedisay in lagu qabto Muqdisho, lagan qeyb geliyo dhammaan saamileyda siyaasadda dalka.